Nzọụkwụ mbụ na Azụmaahịa Ọha: Nchọpụta | Martech Zone
Emechara m ịgụ akwụkwọ n'oge nke abụọ (nke ugboro abụọ) nnukwu akwụkwọ ahụ, Nlekọta Azụmaahịa Site Nhazi: Usoro Mgbasa Ọha Mgbanwe nke Companylọ Ọrụ Na-ejikọ, site Dion Hinchcliffe na Peter Kim.
Ajụjụ m na-anụkarị bụ “Olee ebe anyị ga-amalite?” Azịza ya dị nkenke bụ na ị kwesịrị bido na mbido, ma otu anyi si akowa ihe mbido bu ihe kachasi ike.
Kedu otu nzukọ si aga na-etinye mmekọrịta mmadụ na ibe ya na azụmaahịa echiche n'ime mpaghara ọrụ ha niile? Okwesiri ibu ihe niile ma obu ihe obula, ma obu ka ndi ahia gha agha ya? Ihe omuma ihe omuma di iche iche gunyere nghota na ichota ihe niile Filiks, ihe, na akpata metụtara ọrụ dị n’ime nzukọ. Dịka ọmụmaatụ, gịnị bụ usoro ihe omume nwere ọgụgụ isi chọrọ iji mepụta ma mepụta usoro ịzụta? Akwụkwọ ọnụahịa? Mkpesa ndị ahịa na-esite na Twitter? A ngwaahịa laghachi?
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-abịakwute atụmatụ azụmaahịa na-elekọta mmadụ na-eche na usoro kwesịrị ịhazi ya na mmemme mmekọrịta n'ihu na etiti. Ọ na-abụ ihe na-adọrọ adọrọ ịkọwapụta usoro eserese sitere na nke ọhụrụ a elekọta mmadụ dị mkpa. Mgbe a manyere gị ịkọwapụta usoro niile dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enwe nke ahụ n'aka. Nke a pụkwara ime ka a nwekwuo echiche nke ịdị ngwa, ịhapụ echiche nke ihe.
Ma nke ọzọ, na uche m, ụzọ ka mma bụ ịkọwapụta nke ọma usoro niile dị ugbu a na-aga, ịdabere, akụrụngwa, wdg Otu ihe mere eji eme nke a bu na anaghi eseputa otutu ndi ozo, ma na-adi ka ha ghotahie. Ndị mmadụ anaghị echekarị banyere iwulite ihe owuwu gburugburu ọrụ ndị a, ha na-abụkarị ndị na-agbanwe agbanwe.
Exercisedị mmega a n'ihu nwere ike ịnọchite anya nnukwu itinye ego na akụ. Ọbụna maka ngwa dị iche iche nke ụlọ ọrụ, dị ka SAP, Oracle, na ndị ọzọ, ọ nwere ike ịnọchite anya oge mbụ a na-edepụta usoro azụmahịa na ntụkwasị obi n'ụzọ nkịtị nke ọtụtụ mmadụ nwere ike ịghọta. Ma ka bido mepee ahia banyere mmadu na-enweghị mgbalị a dị n'ihu na-emekwa ka o sikwuoro ike ịchọpụta ihe ndị nwere ike bụrụ na a ga-eji na ịmepụta usoro iji tụọ usoro ndozi. Ma nke a dị mkpa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-eche ugbu a iji (ma ọ bụ na-eche banyere) Twitter ma ọ bụ Facebook dị ka akụkụ nke ọrụ ndị ahịa gị. Nzọụkwụ ụmụaka.
Ihe ọzọ mere eji aghota uzo di ugbua na ihe omume bu na mmega ahu n’onwe ya mata ebe otutu ndi ozo di, ebe ndị na-ekpo ọkụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Echiche nke ebe ndị na-ekpo ọkụ na usoro nwekwara ike ịbụ ihe ngosi na olulu mmiri dị, ebe ndị si na otu ọrụ dị iche iche na-ezukọ na nzuzo (ma ọ bụ ọbụlagodi) iji gbanwere ozi. Ọtụtụ mgbe, akọwapụtaghị ha na usoro usoro dị ugbu a.
Typedị ụzọ a na - eme ka ihe omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya rụọ ọrụ nke ọma na ọ ga - eme dị ka mgbakwunye nke usoro dị ugbu a. Ọ pụtaghị na nzukọ na-efu akara na ịbụ ndị na-emekọ ihe ọnụ, ndị ahịa na ndị ahịa, wdg.Ọ na-egosi na a na-arụ ọrụ mmekọrịta iji nyere aka dozie nsogbu azụmahịa dị oke mkpa.
Mara: Nke ahụ bụ njikọ njikọta na akwụkwọ a!
Tags: dion hinchcliffechọpụtaraPeter kimBusiness Businessazụmahịa azụmahịa site na imeweusoro mgbasa ozi ọha na ezeatụmatụ mmadụ
Nov 27, 2012 na 9:49 AM
N'anya post, Marty. Abù na.
Dee 4, 2012 na 11: 11 AM
N'ezie, otuto dị ukwuu na-esi n'aka nna ukwu. Nnukwu ekele, Chris.
Nov 29, 2012 na 11:51 PM
Ihe ngosi di egwu!
Nchịkọta mara mma, ọ gosipụtara m ihe m na-aghọtaghị
tupu. M kwesịrị ịgba ume maka ọmarịcha ọrụ gị. Ana m enwe olileanya otu ihe ahụ kacha mma
rụọ ọrụ n'aka gị n'ọdịnihu. Daalụ maka ịkekọrịta ozi a na anyị.